NASASHADA KOOXDA: Arsenal Vs Dynamo Moscow: Kulankii Ugu La Yaabka Badnaa Taariikhda Kubada Cagta – Wararka Ciyaaraha Maanta
April 17, 2019 kooxda Nasashada, Wararka Maanta 1
Arimaha ugu la yaabka badan ee aan inta badan ku aragno garoomada kubada cagta ay kulamadu ka socdaan ayaa ah in uu taageere soo galo ciyaarta oo socoto ama in uu garoonka soo galo xayawaan sida Ey, Shimbir, Bisad iyo waxyaabo la mid ah.
Hadii ay xaaladahaas dhacaan waxa la joojiyaa ciyaarta daqiiqado yar si loo xaliyo arintaas kadib waxa dib u bilaabanta ciyaarta oo halkeedii ka sii socota laakiin miyay macquul tahay in la qabto kulan iyada oo aan xitaa kubada la arkayn?
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa kulankii ugu la yaabka badanaa taariikhda kubada cagta.
Kulan u dhexeeyay kooxaha Arsenal iyo Dynamo Moscow ayaan ku soo qaadan doonaa kaas oo aynu odhan karno waa kulankii ugu la yaabka badnaa taariikhda kubada cagta kaas oo dhacay sanadkii 1945-kii.
Garsoorihii dhex-dhexaadinayay kulanaas ayaa ku adkaystay in ay sii socoto ciyaartu inkasta oo ay ka dheceen waxyaabo la yaab leh waliba si joogto ah uga dhacay garoonka.
Kulankaas ayaa ahaa mid saaxiibtinimo ah oo labada kooxood ku dhex amray garoonka kooxda Tottenham ee White Heart Line kulan uu hadheeyay Qiiq aad u weyn kaas oo xitaa keenay in aanad arki karin waxa hortaada maraya.
Inkasta oo ay xiddigaha ciyaarayay dalbadeen in la joojiyo ciyaarta inta uu xaalku hagaagayo hadana garsoorihii ayaa ku adkaystay in ay ciyaartu sii socoto oo la dhamaystiro.
Qiiqa ayaa keenay in ay ciyaartu isku badasho mid qosol iyo la yaab leh iyada oo xiddigaha labada kooxood jabiyeen xeerar badan oo kubada cagta u gaar ah xilli uuna garsooruhu arkayn.
Mid ka mid ah xeerarkaas ayaa ahaa in ay kooxda Dynamo Moscow ku ciyaaraysay 15 xiddig kadib markii xiddigihii la badalayay iyo kuwii badalayayba ku dada jireen ciyaarta.
Taas ayaa keentay in ay kooxda Dynamo Moscow Ku ciyaarto 15 xiddig halka ay kooxda Arsenal ku ciyaaraysay kaliya 11-kii xiddig ee ciyaarta loogu talay galay.
Gunners ayaa dhankeeda ka faa,iidaysatay xaalka Iyaga oo dib ugu soo celiyay ciyaarta xiddig kaadhka cas looga taagay ciyaarta isaga oo ciyaarta dhamaystay isaga oo uuna garsooruhu dareemin.